လေယာဉ်စီးတဲ့အခါ လေယာဉ်မယ်တွေ မပြောတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်(၁၀)ခု – Gentleman Magazine
လေယာဉ်စီးတဲ့အခါ လေယာဉ်မယ်တွေ မပြောတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်(၁၀)ခု
လယောဉျစီးတဲ့အခါ လယောဉျမယျတှေ မပွောတဲ့ လြို့ဝှကျခကျြ(၁၀)ခု
သင်နောက်ဆုံးအကြိမ်လေယာဉ်စီးတုန်းက လေယာဉ်ပျက်ကျသွားမှာကို စိုးရိမ်မိခဲ့ပါသလား။ ဒါက ဒီလောက် အရေးမကြီးပါဘူး။ ပိုအရေးကြီးတာက လေယာဉ်ပေါ်မှာ တိုက်တဲ့ကော်ဖီသောက်ခဲ့ပါသလား။ သောက်ခဲ့မိရင်တော့ သည်းခံဖို့ ကြိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို သင်အနေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က အိမ်သာရေကို သောက်ကောင်းသောက်ခဲ့မိနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာပါလဲ ? အကြောင်းရင်းကတော့ လက်ရှိအဓိကလေကြောင်းလိုင်းတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လေယာဉ်မောင်/မယ်တွေကို လေယာဉ်ပေါ်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြောပြဖို့ အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပြီး သိလာခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကော်ဖီအပြင် အခြားဘယ်လို လျို့ဝှက်ချက်တွေရှိသေးလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ တိုက်တဲ့ကော်ဖီက ကဖိန်းဓာတ်ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေရဲ့ ဖြေကြားချက်အရ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ကော်ဖီ မရနိုင်ပါဘူး။ လေယာဉ်ပျံသန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ခရီးသည်တွေကို နိုးကြားလန်းဆန်းနေတာမျိုးထက် အိပ်ပျော်နေစေချင်တာကြောင့်ပါ။ ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ပေါ်မှာ ကော်ဖီဖျော်တဲ့အခါသုံးတဲ့ ရေကို တိုင်ကီကြီး တစ်ခုကနေ ယူပါတယ်။ ဒီတိုင်ကီကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မလုပ်ဆိုတာ တွေးတောင်မကြည့်ဘူးပါဘူး။ ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကော်ဖီဖျော်ဖို့ သုံးတဲ့ရေနဲ့ ရေအိမ်မှာသုံးတဲ့ရေက တိုင်ကီတစ်ခုထဲကနေ ယူသုံး တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတန်းခရီးသည်မှမဟုတ်ရင် အခြားဘယ်ခရီးသည်မှ ရေသန့်ကို မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သင်ထိုင်နေတဲ့အနီးနားမှာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေမှာ အစားထိုးကုသမယ့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကို ကုန်စည်သိုလှောင်ခန်းမှာ မထားပဲ ခရီးသွားတွေစီးတဲ့နေရာမှာပဲ သယ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဘေးက ခရီးသည်ရဲ့ခရီးဆောင်သေတ္တာထဲမှာ အအေးခံထားတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ပါလာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ခရီးသည်က သေဆုံးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တရားဝင်ပြောရင် လေယာဉ်ပေါ်မှာ သေဆုံးသူမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လေယာဉ်ပေါ်မှာ သေဆုံးမှုတွေကို သတင်းမပြန့်ဖို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တားမြစ်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသည်တစ်ယောက်က ပုံမှန်အတိုင်းတက်လာပြီး နေရာမှာ ထိုင် ခါးပတ်ပတ်ထားမယ်။ ပြီးမှ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံပြီး အိပ်နေသလိုနဲ့ သေဆုံးနေတတ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ခရီးသည်တစ်ယောက်ယောက် သေဆုံးတဲ့အခါမှာ အခြားခရီးသည်တွေ ဆင်းသွားပြီး ဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အချိန်ထိ ဒီအကြောင်းကို မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းထားလေ့ရှိပါတယ်။
လေယာဉ်ဆင်းချိန် တက်ချိန်မှာ ဖုန်းကနေ စာပို့တာ၊ အီးမေးလ်စစ်တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေရဲ့အဆိုအရ သူတို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်ခရီးသည်ကမှ သူတို့က အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေက သင့်ရှေ့မှာ လေလည်ကြပါတယ်။
အူကြောင်ကြောင်ပုဂ္ဂိုဟ်တွေကို တမင်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနီးနားဝန်းကျင်တ၀ိုက်ကတော့ ခံရတတ်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေကိုလည်း ညစ်ပတ်အောင် လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အစားအစာတွေကို အိမ်သာထိုင်ခုံပေါ်မှာ တင်ထားပြီး ပြင်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အိမ်သာတံခါးတွေကို အပြင်ကနေလည်း ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်သာထဲမှာ သေဆုံးနေတာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါကူညီနိုင်ဖို့အတွက် လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေကို ဖွင့်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အတွဲတွေက လေယာဉ်ပေါ်က အိမ်သာထဲမှာ ချစ်တင်းနှောချင်ကြပါသေးတယ်။ ဒီလိုဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံပါဘူး။ အိမ်သာထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားအသံကြားရပြီဆိုတာနဲ့ တံခါးကိုဖွင့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မကြိုးစားကြည့်ပါနဲ့။
လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေကို ဆုကြေးပေးဖို့ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားတတ်ကြပါဘူး။ တကယ်ပေးကြည့်မယ်ဆိုရင် တခြားခရီးသည်တွေထက် ပိုတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း ရနိုင်တယ်။
သင်က အရမ်းလန်းတယ်လို့ လေယာဉ်မယ်တွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ထင်နေရင် အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အ၀တ်အစားအလန်းစားဝတ်ထားပြီး ခပ်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုရင် ရိုးရိုးတန်းလက်မှတ် ၀ယ်ထားပေမယ့် ပထမတန်းမှာ တက်စီးရတာမျိုး အထူးအခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။
သငျနောကျဆုံးအကွိမျလယောဉျစီးတုနျးက လယောဉျပကျြကသြှားမှာကို စိုးရိမျမိခဲ့ပါသလား။ ဒါက ဒီလောကျ အရေးမကွီးပါဘူး။ ပိုအရေးကွီးတာက လယောဉျပျေါမှာ တိုကျတဲ့ကျောဖီသောကျခဲ့ပါသလား။ သောကျခဲ့မိရငျတော့ သညျးခံဖို့ ကွိုတောငျးပနျခငျြပါတယျ။ ဘာလို့ဆို သငျအနနေဲ့ လယောဉျပျေါက အိမျသာရကေို သောကျကောငျးသောကျခဲ့မိနိုငျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ဘာလို့ဒီလိုပွောရတာပါလဲ ? အကွောငျးရငျးကတော့ လကျရှိအဓိကလကွေောငျးလိုငျးတှမှော တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ လယောဉျမောငျ/မယျတှကေို လယောဉျပျေါမှာတှကွေုံ့ရတဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို ပွောပွဖို့ အငျတာဗြူးလုပျခဲ့ပွီး သိလာခဲ့တာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ ကျောဖီအပွငျ အခွားဘယျလို လြို့ဝှကျခကျြတှရှေိသေးလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
လယောဉျပျေါမှာ တိုကျတဲ့ကျောဖီက ကဖိနျးဓာတျထုတျထားတာ ဖွဈဖို့မြားပါတယျ။
လယောဉျအမှုထမျးတှရေဲ့ ဖွကွေားခကျြအရ လယောဉျပျေါမှာ ဘယျသူမှ ကဖိနျးဓာတျပါဝငျတဲ့ကျောဖီ မရနိုငျပါဘူး။ လယောဉျပြံသနျးစဉျတဈလြှောကျလုံးမှာ ခရီးသညျတှကေို နိုးကွားလနျးဆနျးနတောမြိုးထကျ အိပျပြျောနစေခေငျြတာကွောငျ့ပါ။ ဒါ့အပွငျ လယောဉျပျေါမှာ ကျောဖီဖြျောတဲ့အခါသုံးတဲ့ ရကေို တိုငျကီကွီး တဈခုကနေ ယူပါတယျ။ ဒီတိုငျကီကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျမလုပျဆိုတာ တှေးတောငျမကွညျ့ဘူးပါဘူး။ ဒါတငျပဲလား ဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ကျောဖီဖြျောဖို့ သုံးတဲ့ရနေဲ့ ရအေိမျမှာသုံးတဲ့ရကေ တိုငျကီတဈခုထဲကနေ ယူသုံး တာဖွဈပါတယျ။ ပထမတနျးခရီးသညျမှမဟုတျရငျ အခွားဘယျခရီးသညျမှ ရသေနျ့ကို မရနိုငျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
သငျထိုငျနတေဲ့အနီးနားမှာ လူ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှေ ရှိနနေိုငျပါတယျ။
လယောဉျခရီးစဉျတှမှော အစားထိုးကုသမယျ့ လူ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှေ ပါလာတတျပါတယျ။ ဒီဟာတှကေို ကုနျစညျသိုလှောငျခနျးမှာ မထားပဲ ခရီးသှားတှစေီးတဲ့နရောမှာပဲ သယျယူလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဘေးက ခရီးသညျရဲ့ခရီးဆောငျသတ်ေတာထဲမှာ အအေးခံထားတဲ့ ကိုယျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှေ ပါလာနိုငျပါတယျ။
သငျ့ဘေးမှာ အိပျပြျောနတေဲ့ ခရီးသညျက သဆေုံးနတောဖွဈနိုငျပါတယျ။
တရားဝငျပွောရငျ လယောဉျပျေါမှာ သဆေုံးသူမရှိပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လယောဉျပျေါမှာ သဆေုံးမှုတှကေို သတငျးမပွနျ့ဖို့ တငျးတငျးကပျြကပျြတားမွဈထားလို့ ဖွဈပါတယျ။ ခရီးသညျတဈယောကျက ပုံမှနျအတိုငျးတကျလာပွီး နရောမှာ ထိုငျ ခါးပတျပတျထားမယျ။ ပွီးမှ စောငျခေါငျးမွီးခွုံပွီး အိပျနသေလိုနဲ့ သဆေုံးနတေတျပါတယျ။ လယောဉျပျေါမှာ ခရီးသညျတဈယောကျယောကျ သဆေုံးတဲ့အခါမှာ အခွားခရီးသညျတှေ ဆငျးသှားပွီး ဘယျသူမှမရှိတော့တဲ့အခြိနျထိ ဒီအကွောငျးကို မပေါကျကွားအောငျ ထိနျးသိမျးထားလရှေိ့ပါတယျ။
လယောဉျဆငျးခြိနျ တကျခြိနျမှာ ဖုနျးကနေ စာပို့တာ၊ အီးမေးလျစဈတာတှေ လုပျကွပါတယျ။
လယောဉျအမှုထမျးတှရေဲ့အဆိုအရ သူတို့အကွိမျပေါငျးမြားစှာ လုပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ဘယျခရီးသညျကမှ သူတို့က အာရုံမစိုကျနိုငျတဲ့အတှကျ အကောငျးဆုံးပဲလို့ ဆိုပါတယျ။
တဈခါတဈလေ လယောဉျအမှုထမျးတှကေ သငျ့ရှမှေ့ာ လလေညျကွပါတယျ။
အူကွောငျကွောငျပုဂ်ဂိုဟျတှကေို တမငျရညျရှယျပွီး လုပျလရှေိ့တယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အနီးနားဝနျးကငျြတဝိုကျကတော့ ခံရတတျပါတယျ။
အစားအသောကျတှကေိုလညျး ညဈပတျအောငျ လုပျတတျကွပါတယျ။
တဈခါတဈရံမှာ အစားအစာတှကေို အိမျသာထိုငျခုံပျေါမှာ တငျထားပွီး ပွငျဆငျတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မစားတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
အိမျသာတံခါးတှကေို အပွငျကနလေညျး ဖှငျ့နိုငျပါတယျ။
အိမျသာထဲမှာ သဆေုံးနတော၊ ထိခိုကျဒဏျရာရတဲ့အခါကူညီနိုငျဖို့အတှကျ လယောဉျဝနျထမျးတှကေို ဖှငျ့ခှငျ့ပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ တခြို့အတှဲတှကေ လယောဉျပျေါက အိမျသာထဲမှာ ခဈြတငျးနှောခငျြကွပါသေးတယျ။ ဒီလိုဘယျတော့မှအဖွဈမခံပါဘူး။ အိမျသာထဲမှာ ထူးထူးခွားခွားအသံကွားရပွီဆိုတာနဲ့ တံခါးကိုဖှငျ့ပွီး ဓာတျပုံရိုကျမှတျတမျးတငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မကွိုးစားကွညျ့ပါနဲ့။
လယောဉျအမှုထမျးတှကေို ဆုကွေးပေးဖို့ ဘယျသူမှ စိတျမဝငျစားတတျကွပါဘူး။ တကယျပေးကွညျ့မယျဆိုရငျ တခွားခရီးသညျတှထေကျ ပိုတဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှကေို ရရှိနိုငျပါတယျ။
လယောဉျပျေါမှာ အထူးဝနျဆောငျမှုတှလေညျး ရနိုငျတယျ။
သငျက အရမျးလနျးတယျလို့ လယောဉျမယျတှထေဲက တဈယောကျယောကျထငျနရေငျ အထူးဝနျဆောငျမှုတှေ ရနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အဝတျအစားအလနျးစားဝတျထားပွီး ခပျမိုကျမိုကျဒီဇိုငျးနဲ့ဆိုရငျ ရိုးရိုးတနျးလကျမှတျ ဝယျထားပမေယျ့ ပထမတနျးမှာ တကျစီးရတာမြိုး အထူးအခှငျ့အရေးတှေ ရနိုငျပါတယျ။
Previous: ချစ်ဇာတ်လမ်းတိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့် ၁၄ ခု
Next: အိပ်ရာထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ တွေးတတ်သည့်အရာများ